नर्सरी खेतीबाट आत्मर्भिर बन्दै मोरङ पथरीकी राजकुमारी राई - IAUA
नर्सरी खेतीबाट आत्मर्भिर बन्दै मोरङ पथरीकी राजकुमारी राई
ramkrishna September 23, 2017	नर्सरी खेतीबाट आत्मर्भिर बन्दै मोरङ पथरीकी राजकुमारी राई
मिहिनेत र परिश्रम गरे स्वदेशमै केही गर्न सकिन्छ । सानो लगानीवाटै मनग्ये आम्दानी पनि गर्न सकिन्छ । यसको ज्वालन्त उदाहारण बनेकी छिन् पुर्वी मोरङको पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाकी राजकुमारी राई । हिजो अर्काकोमा गएर श्रम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको दैनिकी अहिले फेरिएको मात्र छैन लोभलाग्दो समेत बनेको छ । उनले शुरु गरेको नर्सरी खेती उनको प्रगतिको कारण बनेको हो ।
यो क्षितिज नर्सरी मोरङको पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाको वडानं. १ मा रहेको छ । यो नर्सरीमा दैनिक तीनजनाले रोजगारी गर्ने गर्दछन् । यही नर्सरीमा दैनिक विरुवा रेखदेख गर्दै गरेको अवस्थामा भेटिन्छिन्–राजकुमारी राई । हिजो अर्काकोमा रोजगारी गर्नु जानुपर्ने बाध्यता र घाम पानी नभनी काममा घोटिनुपर्ने अवस्था थियो–राजकुमारीलाई । तर आज भोलि उनी आफनै नर्सरीमा खट्छिन् । उनले पथरीमा मात्रै दुई ठाउँमा भाडामा जग्गा लिएर नर्सरी संचालन गर्दै आएकी छिन् । पथरीको देवी गन्जमा डेढकठ्ठा र सिनेमा हल नजिकै पौने दुई कठ्ठा जग्गा भाडामा लिएर नर्सरी संचालन गर्दै आएकी उनको नर्सरीमा घरका ३ जना र अन्य दुई जना गरी पाच जनाले दैनिक रोजगारी पाएका छन् ।
नर्सरीवाट हुने आम्दानीसंगै अरुलाई पनि रोजगार दिन पाएकोमा राजकुमारी राई दंग छिन् । २०६६ साल देखि नर्सरी गर्न सुरु गरेकी राजकुमारी राईको नर्सरीवाट दैनिक पाच हजार रुपैया वरावरको विरुवा विक्रि हुने गरेको छ । २८ हजार रुपैया ऋण काढेर सुरु गरेको नर्सरी अहिले करिव २५ लाख पुँजीको भएको छ । काम गर्नेहरुलाई तलव दिएर पनि वार्षिक करिव ३ लाख बरावरको आम्दानी हुने गरेको उनले बताईन् । विदेश गएर महिलाहरु जोखिमपुर्ण तरिकाले काम गरेर पैसा कमाउनुभन्दा आफनै गाउ ठाउमा थोरै संघर्ष गरेर केही गर्नु राम्रो हुने उनको धारणा छ । बाइट राजकुमारी राई ..
कमाउन विदेशै जानुपर्छ भन्ने मान्यतालाई तोड्न पनि राजकुमारी राई सफल भएकी छिन् ।
राईको श्रीमान भने बैदेशिक रोजगारीको शिलशिलामा विदेशमा छन् । तर पनि आफुले स्वदेशमै केही गरेर आत्मनिर्भर बन्न सकेकोमा आफुलाई निक्कै खुशी लागेको राजकुमारी बताउँछिन् । यसरी एउटी महिलाले संघर्ष गरेर नमुना काम गरेर समुदायमा देखाएकोमा स्थानीय देबि लिम्वूले पनि निक्कै खुशी लागेको बताइन् । नर्सरी खेतीबाट पाएको सफलताले पूर्वमा राजकुमारी राई उदाहरणीय बनेकी छिन् । मिहिनेत गरे आफनै गाउ ठाउमा बसेर पनि आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ भन्ने गतिलो उदाहरणका रुपमा उनलाई लिनेहरु समेत बढेका छन्
Previous Previous post: ‘कुन्टी’ नमुना होमस्टे गाउ
Next Next post: पर्यटकीय क्षेत्रको बिकास गरेर पलायन युवाहरुलाइ रोजगारी दिनुपर्छ : डा. खतिवडा